Global Voices teny Malagasy · 22 Mey 2017
22 Mey 2017
Tantara tamin'ny 22 Mey 2017
Kazkahstan: Ny Fitantanan-draharaham-Panjakana Resahan'ireo Bilaogera
Azia Afovoany sy Kaokazy22 Mey 2017
[...] Tsy mampino ity firenentsika ity. Firenen'ireo tsy matianina / tia andrakandrana [...]
Satria Efa Akaiky Ny Fifidianana Izay Ho Tale Jeneralin'ny OMS, Voampanga Tamin'ny Resaka Kolerà ny Kandidàn'i Ethiopia
Afrika Mainty22 Mey 2017
Hifidy izay ho tale-jeneraly amin'ny 23 Mey 2017 ireo minisitry ny fahasalamana ao amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny OMS (Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana).
Izay mamirapiratra tamin'ireo bilaogy mahavariana amin'ny teny 11 no mahazo ny Loka ho an'ny Bilaogy Tsara Indrindra 2010. Chez Gangoueus (amin'ny teny Frantsay) no mpandray anjara nahazo ny laharana faharoa tamin'ny loka Bilaogy Tsara Indrindra amin'ny teny Frantsay tamin'ny taona 2010.
Fantaro i Victoria Tinta, Tonian-dahatsoratra Aymara, Izay Mahita An'Izao Tontolo Izao Amin'ny Alalan'ny Global Voices!
Mediam-bahoaka22 Mey 2017
Ny tenindrazako, Aymara no tena mahaliana ahy, Liam-baovao ihany koa aho, amin'izay, mahafantatra mikasika izay zava-mitranga manerantany, hoy i Victoria Tinta, tonian-dahatsoratra Aymara ato amin'ny GV.
Qatar, Misaina ny Fanahy sy ny Fomba Fanao Rehefa Ramadàny
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Mey 2017
Ezahan'ireo mponina ao Doha, Qatara ny manaraka ny Ramadàny sy ireo fameperana ary sazy manokana miaraka aminy.
Tontolo Arabo: Tantara An-tSary
Miaraka amin'ny fakantsariny, bilaogera roa tao amin'ny faritra no nandeha naka sary ny fahazarana sy ireo zavatra meti nisarika ny sainy ary avy eo naneho hevitra tamin'izy ireny. Ireto ny tantara nalefan'izy ireo avy any Koety sy Siria.
Meksika: Zarain'ny Mpifidy Ao Amin'ny Twitter ireo Vato Tsy Manankery
Amerika Latina22 Mey 2017
Naneho ny tsy hafaliany amin'ny rafitra politika ao amin'ny fireneny ireo mpampiasa Twitter ao Meksika, tamin'ny nakàny sary ireo Vato Tsy Manankery nalatsany tamin'ireo fifidianana tamin'ny 5 Jolay 2009
Bahrain, Omàna: Ny Fiainan'ireo Mpiasa Mpila Ravinahitra
Ireo mpiasa mpila ravinahitra, ny ankamaroany avy any Azia Atsimo, no mandrafitra ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka any amin'ireo firenena ao amin'ny Gôlfa. Ato anatin'ity lahatsoratra ity no andrenesantsika ny fiainan'ireo olona roa izay tonga hiasa tany amin'ny Gôlfa.
Milaza Ireo Mpikatroka Fa Mampiely Tahotra Sy Fankahalana Ny Olona Pelaka Ny Haino Aman-jery ao Azerbaijan
"Indraindray manadino ny herin'izy ireo ny mpanao gazety, ary mamitaka ny olona amin'ny fomban'izy ireo tsy matihanina."
Ho Fahatsiarovana An'i Anna, Mpikatroka Mavitrika ho an'ny Rariny ho an'i Afrika, ary Fahaverezana Lehibe ho an'i Global Voices
Namoy ny ainy tampoka sy aloha loatra i Anna Guèye, mpanoratra sy mpandika teny ato amin'ny Global Voices amin'ny teny Frantsay sy feo mahery ho an'ny fiarahamonina Afrikana mpiteny Frantsay ao amin'ny aterineto.